seham-panabeazana SKOTO – FJKM
Mpanazava sy Tily niatrika ny hamehana ara-pahasalamana
Anisan’ny lasibatra nandritry ny valanaretina Covid-9 ny sehatry ny fanabeazana. Ankoatra ny fanabeazana anaty rindrina efatra dia nisedra izany ihany koa ny fanabeazana eny anivon’ny ankalamanjana toy ny fanabeazana Skotisma. Maro ireo sahan’asa tsy maintsy najanona ka anisany amin’izany ny Lasy, ny Fiofanana, ny fihaonambe…
Ho an’ny Tily sy mpanazava manokana dia nisy ihany ireo hetsika natao teny amin’ny tambajotran-tserasera ho famenoana ny fanabeazana izay banga. Karoka nampiasaina tamin’izany ny E-talenta. Lalao fifaninanana nandraisan’ireo beazina rehetra manerana an’i Madagasikara anjara. Talenta nivoitra tamin’izany ny sary asa tanana, tao-vato, kabary, sary miaina sy mozika isan-karazany. Tsy nilalao fotsiny anefa ireo beazina fa nisy ny loka nozaraina toy ny trano lay, fandriana fitondra milasy, finday, sakaosy. Nahavelom-bolo ny fandraisana anjaran’ireo ankizy.
Rehefa nitarazoka ny fihibohana dia niroso tamin’ny dingana faharoa ny fifaninanana saingy nasiana toromarika manokana. Asa tanana sy famoronana no natao. lohahevitra nalaina tamin’izay novoizin ’ny OMMS (Organisation Mondiale du Mouvement Scootisme) ihany ary niompana tanteraka tamin’ny fanodinana ny plastika. Beazina 16 mirahalahy no nandray anjara tamin’izany izay nahitana sampana efatra dia ny mavo, maitso, mena, ary menafify.
Mbola hisy ny dingana fahatelo mialoha ny faran’ny taona ka apetraka amin’ireo Mpiandraikitra isam-pivondronana indray ny fikarohana ireo talenta ananan’ny Beazina. Hisokatra tsy ho ela ny taom-panabeazana 2020-2021, anefa dia mbola mifaningotra amin’ny fisian’ny valanaretina. Ao anatin’izany ny SAmpana MPAnazava sy TIly dia nametraka paik’ady hoan’ny fampivoarana ny fanabeazana toy ny Vidéoconférence, ny fanajana ny elanelana iray metatra hoan’ny Mpivory raha misy izay mivory. Hiverina tsy ho ela araka izany ny fanombohan’ny taom-panabeazana ary atao manaraka ny fepetra ara-pahasalamana hatrany.